- ကလူ - Tele RELAY တစ်ခုစာအုပ်တစ်အုပ်: ဂျနီဖာတစ်နှစ်လူမှုဖူလုံရေးနှုန်း 243 000 ဒေါ်လာသုံးစွဲ
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ကလူ - စာအုပ်: "ဂျနီဖာတစ်နှစ်လူမှုဖူလုံရေးနှုန်း 243 000 ဒေါ်လာသုံးစွဲ
- လူတွေကစာအုပ်: ဂျနီဖာတစ်နှစ်လူမှုဖူလုံရေးနှုန်း 243 000 ဒေါ်လာသုံးစွဲ
Tele RELAY တစ်ခု5သြဂုတ်လ 2019
ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု Brad Pitt အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ, ဆုံးရှုံးမယ်လို့ကြောင့်သုံးနှစ်ကြာကို Justin Theroux နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တပုဒ်ရှည်လျားသော "ညံ့ဖျင်း Jen" ဂျနီဖာခေါ်ပြီ
ဒါပေမယ့်အနစ္စတန် "ညံ့ဖျင်း Jen" လိင်အရအခွင့်အရေးခေါ်ဆိုသူ၏ "မဆင်မခြင်" နှင့်မှားယွင်းသော၏ဇာတ်လမ်းဆန့်ကျင်တွန်းမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
Jen ယောက်ျားသည်စောင့်ရှောက်လို့မရပါဘူး "နှင့်" သူမတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်ကတိသစ္စာပြုသောကွောငျ့ Jen ကလေးရှိသည်ဖို့ငြင်းဆန် "နားလည်မှုလွဲမှားနေကြသည်" ။ အနစ္စတန် InStyle ပြောသည် သြဂုတ်လ 2018, ခြောက်လအစောပိုင်းက Theroux ၏ခွဲခြာကိုရည်ညွှန်း။ လူအပေါင်းတို့၏ "ပထမ, ရှိသမျှကြောင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူငါကျိုးနှလုံးမရှိကြပါဘူး။ နှင့်ဒုတိယအ, သူတို့ကတာဝန်မဲ့ယူဆချက်ရှိပါတယ်။ "
"သူငယ်ချင်းများ" ၏ယခင်ကြယ်ပွင့် "ညံ့ဖျင်း Jen" ၏ပုံပြင်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ဖို့ပဲထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများတစ်ခုမှာမိမိကစားခဲ့ မိမိအမွေးနေ့ကိုကျင်းပနေ sumptuous ခံရသောပွဲ 50e သူမနောက်တဖန် 2016 အတွက်အိန်ဂျယ်နဲ့အတူကွဲပြီးကတည်းကဖော်ရွေဖြစ်လာသည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူ Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon နှင့် Pitt က "ဟောလိဝုဒ်၏သူကားအဘယ်သူရဲ့အဘယ်သူသည်။ " ဟုဆွဲဆောင်
အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းတိုက်ဖျက်ရေးနောက်ထပ်လမ်းကဒီတကားဟုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ် "ကောင်းသောရှာနေကိုအကောင်းဆုံးကလဲ့စားချေသည်။ " 2016 ခုနှစ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်, အနစ္စတန်အမည်ရှိ "လူအများ၏အလှဆုံးမိန်းမ" - နှင့် 2019 ကြောင့်စာရေးသူမှ Ian Halperin လာမည့်စာအုပ် "အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူသူငယ်ချင်းများ" အတွင်းနှင့်အပြီးနှစ်ဦးစလုံးသည်, မိမိအသက်တာ၏အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်နိုင်သည်။
"ဒါဟာတကယ်ကိုသူမဟာသုခချမ်းသာကိုရှာတတ်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေပါဘူး," Halperin The Daily Mail ကအစီရင်ခံတဲ့အရင်းအမြစ်အားဆို၏ ။ "ထိုအခါရှင်းလင်းစွာသူမကကြောင်းပြည့်စုံ။ သူမသည်တကယ်အတိတ်နှစ်အတွင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ သူမသည်သူမသွားလေရာရာ၌အခန်းကိုတက်ထွန်း။ သူမသည်ဟောလီးဝုဒ်၏စစ်မှန်သော icon ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ Jen 50 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ပုံပေါ်တဲ့သူတစ်ဦးမင်းသမီးရှိခဲ့သည်ထင်ကြပါဘူး။ "
သို့သော်ဤအထင်ကရ status ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း - နှင့်သုခချမ်းသာများ၏ခံစားချက် - Halperin သည်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်ပြောသည်အဖြစ်တစ်ဦးတော်တော်လေးတစ်ပြားမှကုန်ကျသည်။
စာရေးသူအနစ္စတန် 243 000 အထိသုံးစွဲဟု Daily Mail ကရသိရသည်ကုထုံး, ယောဂ, အရေပြား resurfacing လေဆာနှင့်အခြားကုသမှုများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ။ ဟုတ်ပါတယ်, အနစ္စတန် Halperin သည်နှင့်အညီ, ကို "သူငယ်ချင်းများ" စုစည်းခြင်းနှင့်ထောက်ခံချက်ထံမှ 200 နှင့် 240 သန်းအကြားခန့်မှန်းခြေအသားတင်ရကျိုးနပ်နှင့်အတူတတ်နိုင်နှင့် သည်အခြားအစီရင်ခံစာများ .
Halperin The Daily Mail ကအနစ္စတန်ဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားသောအလှတရားအစိုးရများနှင့်ပုံစံချပေးအတွက်သုံးစွဲကြောင်းအစီရင်ခံခန့်မှန်းချက်လေဝင်လေထွက်။
1 500 ဒေါ်လာတစ်လနှင့် session တစ်ခုနှုန်း 1 000 ဒေါ်လာအနီးရှိဆံပင် strands အကြောင်းကိုထိပ်မျက်နှာ-range ကိုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အဆီများနှင့်သွေးရည်ကြည်။ အနစ္စတန်ကိုလည်းအကြောင်းကို3800 တစ်ဦးကုန်ကျစရိတ်မှာအကောင်းဆုံး Los Angeles မြို့ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းပို့ချနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်တစ်လဒေါ်လာဖြင့်, သူသည်အစားအသောက်နှင့်စိတ်ကြိုက်ကျန်းမာမုန့်ညက်တစ်နည်းပြများအတွက်အလားတူပမာဏသုံးစွဲသည်။
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာအနစ္စတန်, Leyon Azubuik The Daily Mail ကသည်နှင့်အညီ, သူကပစ်အရာအားလုံး "လွှမ်းမိုး" Halperin အနစ္စတန်က "သူတို့ရဲ့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းအများစုကအမျိုးသမီးတွေပါကမလိုကျနိုငျသညျ။ "
အနစ္စတန်လည်းသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်အာရုံစိုက်နေဆဲဖြစ်ပြီးတစ်မင်းသမီးအဖြစ်စင်မြင့်ကြာ, Halperin ကဆိုသည်။ Daily Mail က။ ဒါဟာသူ့ကိုအနေနဲ့အော်စကာအနိုင်ရခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုရုပ်ရှင်တင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားရန်အပတ်အတွင်းသရုပ်ဆောင်ဖို့လေးရက်ကြာတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း Halperin သို့ပြောသည်။
အနစ္စတန်ကောင်းသောခံစားရဖို့နဲ့ပညာရှင်ပီသစွာကြီးထွားဖို့အချိန်နှင့်ငွေအများကြီးသုံးစွဲခဲ့လျှင်သူမအဖြစ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမြင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်, ကက "တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု," Halperin ရန်သက်တမ်းကြာမိတျဆှေကဆိုသည်။ 19659002] "Jen အတွင်းပိုင်းနှင့်အလွန်အလေးအနက်ထားဖြစ်ခြင်းအပြင်ဘက်တွင်သူမ၏ကြာ," Halperin ရန်မိတ်ဆွေတစ်ကပြောသည်။ "က၎င်း၏လှပသောပြင်ပတွင်ဝိသေသလက္ခဏာထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာဒါဟာဝိညာဉ်ရေးမှာမျှမျှတတဖြစ်နိုင်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ "
PHOTOS ။ သင်ကလက်လွတ်မနိုငျပါသညျ! ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်က၎င်း၏အလွန် bling ခွက်ကိုကျော်ဖြစ်ပျက်
တော်ဝင်မွေးနေ့များ: တဲ့အခါမှာအားလုံးတော်ဝင်မွေးနေ့ရှိပါသလဲ ကိတ်ဝီလျံနှင့်ဟယ်ရီ Meghan ၏မှတ်တမ်း
အိန္ဒိယ - ပါလီမန်သို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားအစိုးရမှထုတ်ဖော်ရမည်။ ကွန်ဂရက် | အိန္ဒိယသတင်း
အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအပေါ်ဟိုတယ်သမားများ၏ဒေါသအမျက် - ဗီဒီယို
Idyll Natalie Koah / Eto'o: Nathalie Koah ရဲ့ Eto'o နဲ့ Obama ကိုတုံ့ပြန်ပုံ
ချစ်စရာကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီမှဂျေရမီဘဲလ် - ဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ Matt Chevalier ကဘယ်သူလဲ။
IBK: "အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်ဟာ Kidal မှာရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kidal ဟာမာလီဖြစ်လို့ပဲ။ သူတို့က Kidal မှာနေရမယ်၊
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,789